I-C01 USB-C Audio Adapter
C02 USB C Jack adaptha
Amachweba Amaningi i-USB-C HUB
Imbobo eyodwa ye-USB-C HUB
Incomo ye-USB4 incoma futhi yakhela phezu kokucacisiwe okukhona kwe-USB 3.2 ne-USB 2.0. Ukwakhiwa kwe-USB4 kuchaza indlela yokwabelana ngesixhumanisi esisodwa esinejubane nezinhlobo eziningi zamadivayisi wokuphela ngamandla ezisebenza kahle kakhulu ekudlulisweni kosuku ngu-tyye nohlelo lokusebenza. Njenge-USB Type-C ...
I-HDMI Display Port
I-HDMI yakhelwe ukumiselela izixhumi ezindala zokulalelwayo komsindo nevidiyo ezinjengezikhumulo ze-SCART noma ze-RCA. Ixhasa amafomethi ahlukahlukene we-TV nawekhompyutha, kufaka phakathi i-SDTV, ividiyo ye-HDTV, kanye nomsindo wedijithali weziteshi eziningi. Kokubili i-HDMI ne-UDI ngaphandle komsebenzi wokudlulisa umsindo kuzuza njengefa ...
Ngabe i-HDMI ingcono kune-VFA, uma kunjalo, siyini isizathu?
I-VGA isondela eminyakeni engama-35 manje futhi iyifomethi ye-analogue. Kwikhompyutha yanamuhla lokhu kusho ukuthi kufanele uguqule usuke kusiginali yedijithali, uye kwi-analogue RGB nokuvumelanisa, bese ubuyela kwidijithali ukukhonjiswa kumqapha wakho we-LED / LCD - kuzoba nokulahleka okuthile kwekhwalithi yesithombe esigabeni ngasinye, kufaka phakathi ...
Yini i-USB 3.2 ejwayelekile?
I-Universal Serial Bus, noma i-USB, ibikade ikhona futhi siyisebenzisile ukuxhuma amadivayisi ahlukahlukene kusuka kusitoreji kuya kokufakwa kwehadiwe. Njengoba isikhathi sihamba, amazinga adinga ukuvuselelwa ukuze ahambisane nezidingo zesimanje zehadiwe nezabasebenzisi bokugcina. Imininingwane kanye nezobuchwepheshe ezahlukahlukene ...
Ihabhu le-USB-C nehabhu le-USB 3.1 Thola konke odinga ukukwazi ngamahabhu e-USB-C namahabhu e-USB 3.1 lapha. Uyini umehluko? Ingabe kukhona ukuhlukaniswa? I-USB Type-C yifomethi yokuxhuma eyethulwe ngo-2015. Isixhumi se-Type-A, ebesekujwayelekile isikhathi eside, sizoshintshwa ...
Ihabhu le-USB 3.0 Izinga le-USB 3.0 elethwe ngo-2008 lathembisa ukukhuphuka kwezinga lokudluliswa kwedatha uma kuqhathaniswa ne-USB 2.0 eyandulelayo kwezobuchwepheshe. Ngenxa yokuthi i-USB 3.0 iyahambisana nobuchwepheshe bangaphambilini, amadivayisi amadala asakwazi ukusetshenziswa ngehabhu entsha ye-USB 3.0. Fingqa ...
Yini i-HDMI eletha kithi?
I-HDMI Technology Cishe amadivayisi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisishiyagalombili anikwe amandla ubuchwepheshe be-HDMI athunyelwe selokhu kwakhishwa imininingwane yokuqala ye-HDMI ngoDisemba 2002. Imininingwane yakamuva ye-HDMI 2.1 ekhishwe ngoNovemba 2017 iyaqhubeka nokunika amandla ukuthuthukiswa kwezigaba zemikhiqizo emisha kanye ne-solutio entsha ...
kuyini Ukucaciswa kwe-HDMI 2.1;
Ukucaciswa kwe-HDMI 2.1 Ukucaciswa kwe-HDMI® 2.1 isibuyekezo sakamuva kakhulu sesincazelo se-HDMI futhi isekela ububanzi bezinqumo eziphakeme zamavidiyo namazinga wokuvuselela ahlanganisa i-8K60 ne-4K120, nezinqumo ezifika ku-10K. Amafomethi we-Dynamic HDR nawo asekelwa, futhi amandla we-bandwidth ayenyuka ...
Sisebenza kanjani isixhumi se-USB Type-C kwimodi ye-HDMI Alt?
Imodi ye-HDMI Alt yesixhumi se-USB Type-C TM ivumela amadivayisi womthombo anikwe amandla i-HDMI ukuthi asebenzise isixhumi se-USB Type-C ukuxhuma ngqo kwizibonisi ezinikwe amandla i-HDMI, futhi ahambise amasiginali nezici ze-HDMI ngentambo elula ngaphandle kwesidingo seprotocol kanye nesixhumi ama-adaptha noma ama-dongle. Lokhu kwenza ukuthi t ...
yini i-USB 3.2?
Ukucaciswa kwe-USB 3.2 Njengoba ubuchwepheshe bumasha buya phambili, izinhlobo ezintsha zamadivayisi, amafomethi wemidiya, nokugcina okukhulu okungabizi kakhulu kuyahlangana. Zidinga umkhawulokudonsa ophawuleka kakhulu ukuze kugcinwe abasebenzisi bokuhlangenwe nakho abakulindele. Ngaphezu kwalokho, izicelo zomsebenzisi zifuna i-hi ...
Isici Seshaja le-USB (Ukulethwa Kwamandla we-USB)
I-USB iguqukele kusixhumi esibonakalayo sedatha esikwazi ukunikezela ngamandla akhawulelwe kumhlinzeki oyinhloko wamandla ngesixhumi esibonakalayo sedatha. Namuhla amadivayisi amaningi akhokhisa noma athola amandla awo emachwebeni e-USB aqukethwe kuma-laptops, izimoto, izindiza noma amasokhethi odonga. I-USB isibe isokhethi lamandla atholakala kuyo yonke indawo ...
1. Ikhebula le-USB Type-C® kanye Nesixhumi odinga ukukwazi
Ukucaciswa Kwentambo ye-USB Type-C® kanye Nesixhumi Ngempumelelo eqhubekayo yesixhumi esibonakalayo se-USB, kunesidingo sokuvumelanisa ubuchwepheshe be-USB ukuze busebenzise amapulatifomu amadivayisi amasha wekhompyutha njengoba ethambekela ezintweni ezincane, ezincane nezikhanyayo. Eziningi zalezi zingxenyekazi nezinsiza kusebenza ...
Yiba nguchwepheshe ngoba uzinikele, uyasikhetha, ukhetha isipiliyoni esihlukile sesevisi.Inkampani yethu ingumhlinzeki wezixazululo ezihlanganisiwe ze-R & D, ezokuklama, zokukhiqiza nezokumaketha.
Ikheli: I-Wanfeng Innovation Center, 1048th 358 Road Road, Shatou Area, Chang'an Towm, Dongguan City, Guangdong, China.
Ngabe i-HDMI ingcono kune-VFA, Uma kunjalo, Yini ...
Bhalisela okwethu Incwadi yezindaba ye-USN Life & thola i-vouchert yesaphulelo esingu-10%